एक उत्कृष्ट रमाईलो कागती गन्धको साथ उत्तम शहर मफिनहरू। | ThermoRecines
निम्बू-स्वाद नगर शहर मफिनहरू
18-24 ud व्यक्ति120२ क्यालोरी
आज यो भिडियोरेटा हो !! हामी केहि तयार गर्न जाँदै छौं धेरै स्वादको साथ मफिनहरू म तिनीहरूलाई कसरी मन पराउँछु! घरमा हामी कहिले पनि औद्योगिक पेस्ट्रीहरू खरीद गर्दैनौं, तपाईंलाई के खाजाको लागि मिठो र एक खाजा? दुई पटक नसोच्नुहोस् र आफ्ना बच्चाहरूलाई यो स्वस्थ र धेरै घरेलु स्वादिष्ट बनाउनुहोस्।
तपाईं देख्नुहुनेछ कि तिनीहरू एक क्षणमा तयार छन्, तपाईंले केवल आटाको minutes मिनेटको मिक्स गर्ने समयलाई आदर गर्नुपर्दछ कि उनीहरू धेरै शराबी छन् र यो नै हो। यदि तपाईंसँग अधिक समय छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई रातो फ्रिजमा आराम गर्न छोड्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईंले तिनीहरूलाई बेक गर्दा तिनीहरू पनि फ्लफाइर हुन्छन्, तर यदि होईन भने केही मिनेट मात्र पर्याप्त छ। नतीजाको रूपमा यो पनि धेरै राम्रो हुनेछ।
Y हामी कसरी त्यसलाई संरक्षण गर्छौं? हामीले तिनीहरूलाई एउटा प्लास्टिकको झोलामा राख्यौं र उनीहरू उत्कृष्ट रहन्छन्5० दिन सम्म। यदि यो अब जस्तै धेरै तातो छ, राम्रो फ्रिज मा राख्नुहोस् ताकि तिनीहरू खराब नहोस्।
1 रेसिपी भिडियो
2 कसरी विधि तयार गर्ने
3 निम्बू-स्वाद नगर शहर मफिनहरू
यहाँ एक भिडियो छ जसमा तपाईं कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कागती स्वाद नगर muffins नुस्खा:
कसरी विधि तयार गर्ने
उत्तम लिम्बू-सुगन्धित शहर मफिनहरू। सुपर फ्लफी: सबै भन्दा राम्रो खाजा, उत्तम बिहानको खाजा। राम्रो गिलास दूध, कफी वा कोलाको साथ, तिनीहरू अपूरणीय छन्।
सेवाहरू: १-18-२24 एकाइहरू
१ निम्बूको छाला (सेतो भाग बिना)
G 250 ग्राम हल्का जैतुनको तेल
गहुँको पीठो को १ 375० ग्राम
रॉयल® प्रकारको खमीरको १ खाम
हामी गिलासमा कागतीको खोर्सानी र चिनी राख्छौं। हामी प्रोग्राम १ मिनेट, प्रगतिशील गति 1-5-१०।
हामीले पुतली ब्लेडमा राख्दछौं र अंडा बनाउँदछौं सुगन्धित चिनीमा जुन हामीले भर्खर तयार गरेका छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, º०º, गति २.
समय सकियो, हामी फेरि प्रोग्राम गर्‍यौं Minutes मिनेट, º०º, गति २.
पहिलो minutes मिनेटको अवधिमा हामी तेल गिलासको साथ ढकनीमा अलि अलि थप्छौं।
पछिल्लो minutes मिनेटमा हामी दुधको साथ गर्दछौं।
हामी पुतली हटाउँछौं।
स्टेड गरिएको पीठो र खमीर र कार्यक्रम थप्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १। यदि हामीसँग समय छ भने हामी आटा कम्तिमा १ घण्टा फ्रिजमा राख्छौं वा हामीसँग भएको समयको आधारमा बढी वा कम।
हामी ओभन २ 220२ डिग्री सेन्टिग्रेडमा तताउँदै माथि र तल तात्यौं।
ओभन तापिरहेको बेला आटा कप कक केप्सुलमा कडा मफिन प्यानमा खन्याउनुहोस्। प्रत्येक क्याप्सूलको ¾ भागहरू वा अलिकति भर्नुहोस् र चिनीको साथ प्रत्येक कप केकको सतह छर्कनुहोस्।
माथि र तल तातो संग १ or वा २० मिनेट को लागी २००º मा बेक गर्नुहोस्।
हामी र्याकमा हटाउँछौं र तिनीहरूलाई शान्त बनाउन दिन्छौं। हामी प्लास्टिकको झोलामा राख्छौं।
तिनीहरूलाई केरा र अखरोटको साथ प्रयास गर्नुहोस्:
केरा नट muffins
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: १ बर्ष देखि years बर्ष सम्म, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेस्ट्री » निम्बू-स्वाद नगर शहर मफिनहरू
राम्रो मित्र धन्यवाद।
कृपया मलाई यस ईमेलमा थर्मोमिक्सको साथ माछा क्रोकेट्सका लागि व्यंजनहरू पठाउनुहोस्। धन्यवाद।
Menchu ​​लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, ती स्वादिष्ट र धेरै रसदार छन्। तपाईंको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि धन्यवाद।
चारो रोलिन स्टोन्स भन्यो
यो भान्साको मा Yiya को सही नुस्खा हो ... महान नुस्खा
चारो रोलिन स्टोनमा जवाफ दिनुहोस्
Succulents… .. उम्म। धन्यवाद !! र मैले तिनीहरूलाई थर्मोमिक्स बिना नै बनाएको छु, मसँग loanण के छ?
नाइन्सलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले तिनीहरूलाई बनाएको छु र प्रत्येक मोल्डमा पिठोको बिचमा मैले न्यूटेला हालेको छु ...
कति राम्रो विचार आना, हामी तिनीहरूलाई कोशिस गर्नेछौं ताकि तिनीहरू निश्चित हुन निश्चित छन्। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
मारिया डी लास मर्सिडीज रिओजा रेस भन्यो
मसँग मफिन ट्रे छैन। म तिनीहरूलाई कहाँ राख्न सक्छु
मारिया डे लास मर्सिडिज रिओजा रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू स्वादिष्ट छन्, म तिनीहरूलाई बनाउनको लागि कहिले पनि थकित छैन, आटा तिनीहरूलाई तयार पार्नको लागि दिउँसो वा अर्को दिन म यसलाई परिमार्जन गर्छु चकलेट शेभिंगहरू थप गरेर र यो तपाईंको सजिलो र सरल रेसिपीको लागि शानदार धन्यवाद हो।
मैले गरेको सब भन्दा राम्रो! स्वादिष्ट र सुपर शराबी! घरमा तिनीहरू हराउँछन्।
कार्मेनमेन्सीलाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक कार्मेन, तपाईंको टिप्पणी कस्तो रमाईलो छ! हामीलाई लेख्न र हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। म धेरै खुसी छु कि उनीहरू घर मा सफल भए, हामी उनीहरूलाई माया गर्छौं 🙂
अना जेसिका भन्यो
शुभ अपरान्ह, मैले लिम्बूको सुगन्धित मफिनहरूको विधि देखेको छु, तर मेरो प्रश्न यो हो कि यदि म एकै समय र सबै चीजहरूको साथ डबल पिठो बनाउन सक्छु तर दुबै राशिलाई दु: ख दिन्छ किनभने सबैका लागि त्यहाँ केही रकमहरू हुन्छन् जुन मफिनबाट बाहिर आउँदछ।
एना जेसिकालाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो अना हो, एकै समयमा र दुई पटक रकमहरू। तिनीहरू स्वादिष्ट हुन्छन् र तपाईं भिडियोको साथ चरण-चरण सबै कुरा देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं रेसिपीमा नै पाउनुहुनेछ। तपाईं हामीलाई बताउनुहुन्छ कि उनीहरू कसरी फर्के! हामीलाई अनुसरण गर्न र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद! अभिवादन 🙂
डोलोरेस अबेलान भन्यो
खाना पनी कम तापमान र अधिक संग सुधार।
डोलोरेस एबेलनलाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद डोलोरेस! म अर्को पटक यो प्रयास गर्न जाँदैछु 🙂
मैले यो रेसिपी पहिलो पटक बनाएकोले नै मफिनहरूसँग प्रेम गर्छु, परिमाणहरू र तयारीको विवरण सही छ। तिनीहरू धेरै माथि जान्छन् र यी सुपर शराबी र रसीला, तिनीहरूले मलाई कडा वा सुख्खा बिना एक हप्तासम्म चलाउँछन्।
यो खुशी साझा गर्न को लागी धेरै धन्यबाद
लौरिसियालाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया यूजेनिया भन्यो
मैले रेसिपी प्रयास गरें र यो स्वादिष्ट छ। म त्यसलाई दलियाको साथ बनाउन चाहान्छु। के कसैले प्रयास गरेको छ? के तिनीहरू समान मात्रा र समय हुन्छन्? धन्यवाद!
मारिया युजेनियालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले तिनीहरूलाई माया गरेको छु, नुस्खा उत्तम छ र तिनीहरूले मलाई धेरै बेरसम्म पुर्याएका छन्।
धेरै राम्रो, तिनीहरूले मलाई सिफारिस गरेदेखि मैले तिनीहरूलाई बनाउन छोडेको छैन
कस्तो खुशी थेरेसा! सत्य यो हो कि तिनीहरू अद्भुत रूपमा बाहिर आउँछन्, यो एक अचम्मको नुस्खा जस्तै हो !! 🙂
गर्मी तरकारी संग पास्ता